musha nyika dzakabatana Mabhokisi Andy Ruiz Jr Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeMexican-American Boxer ine zita remadunhurirwa “Muparadzi".
Yedu shanduro yeAndy Ruiz Jr's Biography uye Childhood Nyaya inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Andy Ruiz Jr Biography - Kubva paHupenyu hwake hwepakutanga kusvika panguva yeMukurumbira.
Hongu, munhu wose anoziva wepanyama yake isiri yemitambo ine maoko anokurumidza. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Andy Ruiz Jr's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Andy Ruiz Jr Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kutanga kubva, Andrés Ponce Ruiz Jr akazvarwa pazuva re11th raGunyana 1989 kuImperial Valley muCalifornia, US
Andy Ruiz Jr aive mumwe wevana vana vakazvarwa naamai vake, Felicitas uye kuna baba vake, Andrés Ruiz Sr. Tarisai vabereki vake vanodiwa.
Andy Ruiz Jr vabereki - Andy Ruiz Sr naFelicitas.
Andy Ruiz Jr Kwakabva Mhuri:
Nyika yeMexico-America inemidzi yemhuri yeNorth America. Kuwedzerwa kumhuri yekwaRuiz kwakabva midzi yake yekuSouth America inoenderana neLatino dzinza.
Unoziva here kuti Ruiz akakurira padhuze nemuganhu weMexico kuBrawley muCalifornia kwaakakurira pamwe chete nehanzvadzi nhatu dzinozivikanwa?
Andy Ruiz Jr akakurira pamwe chete nehanzvadzi dzake diki diki dzinozivikanwa kuBrawley muCalifornia.
Kukura paBrawley, Ruiz aive akagwinya asi asina kugadzikana mwana aifarira kutyora zvinhu uye kupinda mudambudziko.
Panguva iyo Ruiz aive nemakore matanhatu, baba vake vakafunga kuti imba yavo yaisazomboziva rugare kana "Muparadzi" asingawani chinobuditsa chinoburitsa simba rake rine hukasha.
Nekudaro, Ruiz akanyoreswa zvine simba mujimu asingatarise nyaya yekuti aida kuve mutambi webaseball.
Ndichiri kuimba yekurovedza muviri, Ruiz akatanga nekarati asi pasina nguva akarasikirwa nechido ndokuchinjira kumutambo wetsiva.
Andy Ruiz Jr Dzidzo:
Mavhiki maviri ekutanga aRuiz ekuyedza kuita tsiva aive rubhapatidzo rwemoto. Iye ipapo 6-gore-rekare akarohwa zvakashata asi haana kumbosiya mutambo nekuti baba vake vakamugonesa kuti zvinhu zvaizongoita zvirinani.
Chokwadi, zvinhu zvakave nani kuna Ruiz paakaenderera mberi nekuita yake yekutanga amateur kurwa se7-makore-ekukura muSan Diego kwaakarwa neyegumi nemaviri-makore nekuti pakanga pasina 12-gore-makore aiyera zvakanyanya se akadaro.
Mufananidzo usingawanzoonekwi wemakore XXUMX-makore Andy Ruiz Jr achitungamira kutengeserana kwake seAmateur boxer. Mufananidzo Chikwereti: DailyMail
Zvino makore mashoma zvichidzika, kurwa kwevana vakura kwakaratidza kuve nekuderera apo Ruiz ane makore gumi negumi nerimwe akakurudzira kurwisa mapurisa achiedza kunzvenga kusungwa nekutandara nenhengo dzechikwata nevatengesi vezvinodhaka.
Pakukwirira kwemisikanzwa yake ine hukasha, Ruiz akadzingwa kubva kusekondari yekurwa, chiitiko chakapa mutambi wetsiva mukana wekutarisa kumutambo wetsiva.
Andy Ruiz Jr Biography - Upenyu Hwepakutanga:
Akasungirirwa nechitarisiko chinonakidza chemumhanzi che105-5 kusanganisira mamiriyoni maviri egoridhe kuMexicoan National Junior Olympics, Ruiz aireva Mexico muMitambo ye2008 Olympic asi akakundikana kukwanisa kurasikirwa naRobert Alfonso uye pamwe nevamwe vane simba guru reightender, Oscar Rivas.
Asina kuodzwa moyo nekusimudzira, Ruiz akachinja pro muna2009 uye akaita hunyanzvi hwake mukukunda kurwisa Miguel Ramirez musi wa28 Kurume 2009.
Mushure meizvozvo, kwaive kukunda mushure mekukunda kwaRuiz nguva dzakaoma dzakatarisa mutambi wetsiva kumeso ndokumuita kuti afunge nezveramangwana rake mumutambo wetsiva.
Andy Ruiz akatonga Miguel Ramirez panguva yake nyanzvi yekutanga mu2009.
Andy Ruiz Jr Biography - Rwendo rweKukurumbira:
Achitaura nezvenguva dzakaoma, Ruiz akaona kufa kweshamwari yake, Frankie Leal uyo akafa mushure mekugogodzwa mumutambo wetsiva we2013.
Pamberi porufu rwaFrankie, Ruiz akange arasikirwawo neshamwari yezera refu, Alejandro Martinez uyo akazokundwa nerufu mushure mekupfuura nemwedzi makumi matatu nemanomwe tsiva yakakonzera coma kubva mukurwa kwa37.
Makore matatu mushure mekufa kwaFrankie, Ruiz akanyora kukunda kwake kwekutanga kwehunyanzvi paakarwa naJoseph Parker kuzotora chinzvimbo cheWBO chisina basa muna Zvita 2016.
Asina kufara nekukundwa kwake Ruiz akatora nguva kuti afunge zvaasina kuita nemazvo uye nekugadzirisa kuita kuti kurasikirwa kwake kuve kwekupedzisira.
Andy Ruiz Jr akanyora kukunda kwake kwekutanga kwehunyanzvi paakarwa naJoseph Parker mu2016.
Andy Ruiz Jr Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Achikwira pamusoro pekurasikirwa chete pamutambo wake wepamberi, Ruiz akakunda hondo dzake nhatu dzaitevera uye akawana chido chekutarisana Anthony Joshua mushure mekukwikwidza kwekupedzisira, Jarrell Miller akakundikana nhevedzano yebvunzo dzezvinodhaka izvo zvakaona kuti abude kubva mukurwa.
Mazuva mushure mekunge bhidhi rachengetedzwa, Ruiz akatarisana naAnthony Joshua kuMadison Garden muNew York City.
Pamberi pemutambo, mikana yaive mukufarira 'Joshua kukunda' zvakapihwa izvo Ruiz akataridzika slobby kana achienzaniswa nemumhanyi wake wemitambo.
Nekudaro, Ruiz akaratidzira kuve iye akakwana chimiro chemwana wepasi apo iye akatsamwisa uye akabvisa Anthony Joshua webhandi rake reWBO, WBA, IBF neIBO.
Nekukunda kunonakidza, Ruiz akazova wechipiri Latino uye munhu wekutanga wedzinza reMexico kuti ave shasha yepasi rese inorema. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Andy Ruiz Jr akakunda Anthony Joshua muna Chikumi 1st 2019 kuve iye mutsva wepasi rose heavyweight shasha.
Andy Ruiz Jr Mudzimai uye Vana:
Iye Boxer akaroora panguva yekunyora iyi bio. Tinokuunzira chokwadi nezve nhoroondo yake yekufambidzana uye hupenyu hwewanano.
Kutanga, wekuMexico haazivikanwe kuti akambofambidzana chero mukadzi kana kuita vasikana asati asangana nemukadzi wake mudiki anozivikanwa anonzi Julie.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve brunette anopinda kurwa kwemurume wake uye anopemberera kukunda kwake naye
Kunyangwe zvakadaro, muchato wake naRuiz wakapa kuberekwa kwevanakomana vaviri nevanasikana vaviri pamwe nekamwe kadiki kanozivikanwa mwana wekuwedzera.
Mwanakomana wavo mukuru anonzi Andy Ruiz iii apo mwanasikana mukuru anoenda achinzi Bella Ruiz. Kune rimwe divi, mwanakomana mudiki nemwanasikana ndiRichie Ruiz naBeverly Ruiz zvichiteerana.
Kubva kunaRR: Andy Ruiz Jr, Andy Ruiz iii, Bella Ruiz naAndy Ruiz Sr.
Andy Ruiz Jr Chokwadi cheMhuri:
Andy Ruiz anobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezve hupenyu hwemhuri yake pamwe nekutsanangura zviripo zvinyorwa zvemadzitateguru aRuiz kutanga nevabereki vake.
Nezve baba vaAndy Ruiz Jr:
Andrés Ruiz Sr ndiye baba vebhokisi. Iye muMexico akatama kubva kumuganhu weguta reMexicali kuMexico kuenda kuImperial Valley muCalifornia uko Andy akaberekerwa.
Ivo baba vanotsigira vanochengetedza hukama hwepedyo naRuiz vanozivikanwa nekumusvitsa kumutambo wetsiva pamwe nekudzora iye -iye mudiki akawandisa pese paakatadza.
Baba vaAndy Ruiz Jr.
Nezve amai vaAndy Ruiz Jr:
Felicitas ndiAndy Ruiz ari padyo-anotaridzika-amai-anga anga ari wekutsigira kwakakura pabasa rake rinonakidza.
Akatarisa mazhinji emitambo yake uye akatombooneka kuMadison Garden muNew York City panguva yekukunda kunokatyamadza kwaRuiz kuna Anthony Joshua.
Amai vaAndy Ruiz Jr.
Nezve Andy Ruiz Jr's Siblings:
Ruiz akakurira pamwe nehanzvadzi nhatu dzinozivikanwa zvishoma nezvadzo panguva yekunyora.
Zvakangodaro, zvinofungidzirwa kuti vaive nehupenyu hwakanaka hwepakutanga uye havana kukura vakaparadzana.
Nepo hanzvadzi dzaRuiz dzisati dzave kunyatsozivikanwa pamwe netsiva, zvakakosha kuti uzive kuti mutambi wetsiva zvakare ane mukoma mudiki uyo zvishoma anozivikanwa nezvake.
Kubva kunaRR: Munun'una waAndy Ruiz Jr, amai vaRuiz nemwanasikana mukuru waRuiz Bella.
Nezve hama dzaAndy Ruiz Jr:
Kuenderera mberi kuhama dzaAndy Ruiz dzehupenyu hwemhuri hwakawedzerwa, hapana marekodhi asekuru nasekuru vake pamwe nasekuru nambuya nasekuru.
Saizvozvowo, Ruiz babamunini, vanamainini, babamunini, vazukuru uye babamunini havana kuzivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa kubva pahupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Andy Ruiz Jr ane yakawanda isingazivikanwe mitezo yemhuri yake hombe.
Andy Ruiz Jr Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Andy Ruiz Jr akanganise? Gara kumashure apo isu tichikuunzira maitiro ehunhu hwaRuiz kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake. Kutanga, Ruiz persona isanganiswa yeVirgo Zodiac maitiro.
Anoshanda zvakanyanya, ane tariro, ane pfungwa yakanaka yekuseka uye haawanzo buritsa ruzivo nezve hupenyu hwake hwepachivande uye hwakavanzika.
Mutambi wetsiva ane zvido zvishoma uye zvekuvaraidza zvinosanganisira kudya, kudya chikafu chakanaka, kurovedza muviri, kutonhodza kunzvimbo dzinodhura dzekudyira pamwe nekushandisa nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Kudya uye kudya chikafu chakanaka chiri pane refu Ruiz runyorwa rwezvido.
Andy Ruiz Jr Mararamiro echokwadi:
Andy Ruiz Jr ane mari inofungidzirwa kuti inodarika pamusoro pe £ 5.36m panguva yekunyora.
Huzhinji hupfumi hwaRuiz haubvi parukova rwakadzama rwemubhadharo uye kubva pamari hombe yaanotakura mushure mekukunda mabheji vamwe vachitora mafomu ekubvumirana.
Uchapupu kana humbowo hwemararamiro akadai anosanganisira Ruiz's £785k mota yekuunganidza iyo inodada nekukwira kunodhura seMercedes G Wagon G550, Roll-Royce pamwe neLamborghini Urus.
Andy Ruiz Jr achimisa padhuze neRoll Royce yake.
Achitaura nezvekuti Ruiz anogara kupi uye sei, ane imba hombe kuCalifornia iyo inofungidzirwa kuve yakakosha mari.
Imba inova imba yakakodzera maMambo ine makamuri edeluxe, padziva rekunze pakati pezvimwe zvinhu zvepamusoro.
Andy Ruiz Jr Chokwadi:
Kuputira yedu Andy Ruiz Jr mwana wehupenyu nhau pano zvishoma zvinyatsozivikanwa kana zvisingaverengeki izvo zvisingawanzobatanidzwa mubhuku rake.
Nezve Andy Ruiz Jr Tattoo:
Andy Ruiz ane tattoo yakakurumbira pachipfuva chake. Iyo yemuviri hunyanzvi inoratidzira maoko akabatanidzwa mumunamato mode uye yakakomberedzwa nemakore nemaruva.
Pamabiceps akarudyi aRuiz pane mazwi anotsanangura nhaka "Hecho En Mexico" zvinoreva kuti 'Yakagadzirwa muMexico'. Mubati wetsiva uyo ane hurefu hwe6 '0 ″ ane zvakare nyora kumusana kwake inoti "Anokunda".
Andy Ruiz - Tattoos Chokwadi.
Nezve Andy Ruiz Jr Chitendero:
Chinyanyozivikanwa pamusoro pechitendero cheRuiz asi zvisinei zviri mukutenda iye kuva muKristu. Kunyanya saka akambotaura kuti haatyi munhu asi Mwari panguva yekuvaka kwake hondo Anthony Joshua muna June 2019.
Kunwa uye Kusvuta
Ruiz anga achionekwa ega achinwa zvine mwero asi achiri kuonekwa achiputa. Icho chizere ruzivo kuti mutambi wetsiva anotora hutano hwake zvakanyanya uye aisazoita chero chinhu kuchikanganisa.
Andy Ruiz Jr Biography Vhidhiyo Pfupiso:
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Andy Ruiz Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinovavarira huroyi uye kururamisira mukuunza iwe Biography Nyaya dze United States Mabhokisi.